Ikhwalithi amalebula oluthinta ngqo nesimo sengqondo sabantu abathengi ukuba imikhiqizo ahlinzekwa kanye ukuthembeka jikelele wenkampani. Leli thuluzi ikuvumela ukuba umphelelisi ukubonakala umkhiqizo, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa umthengi isikhalazo okukhulu, kungekho izindleko ezinkulu futhi kahle idlula wonke amathemba. ilebula Self-ingcina yakha umbono wokuqala we umkhiqizo, ngakho-ke akufanele kwenziwe nje yokuqala, kodwa futhi eliphezulu kuqalisa. ngokubhala inobudlabha futhi imiphetho jagged akuzona uthembekile futhi nomthelela ekukhethweni kuka ezinye izinketho. Ukuzaliseka yimuphi umkhiqizo kwandisa nge elikhanyayo, Isitika oncomekayo.
Abathengi ngokuyinhloko banake lo mkhiqizo, nge design ngenxa kanye ukubukeka ekhangayo. Amalebula Self-ingcina injongo umkhiqizo, imininingwane yayo kanye neminye imininingwane efanele. Yingakho kufanele senziwe zokwakha zeqophelo eliphezulu nge ukwengeza imibala ezicacile elikhanyayo. Ngenxa yokuthi imikhiqizo basonta isigaba inkomba, kufanele ngaso sonke isikhathi aqukethe ekubizweni imikhiqizo iphakethe, kanye nohlu izakhiwo atholakalayo. umkhakha Modern linikeza ukuthi kungenzeka usebenzisa izitsha kanye emaphaketheni ezinhlobo ezehlukene nezakhiwo. It kuncike nemingcele imikhiqizo nokukhangisa, ikakhulukazi izinto base esetshenziswa ukuphrinta amalebula self-Yesigcilikisha, ukuma Ubukhulu jikelele.
Izitika ihlukaniswa ngokusebenzisa lezi zinhlobo ezilandelayo:
amalebula Thermal zenzelwe ukukhiqizwa isikhathi amancane naphakathi kokusebenza. Sinenkosi ukumelana ongaphakeme lokushisa, ngenxa okuyinto silondoloze ukubukeka kwabo unyaka owodwa.
Thermal ukudluliswa ingcina amalebula A4 amashidi. On the yenethiwekhi kungenziwa athuthwe usebenzisa itheyiphu ekhethekile izinhlobo ezahlukene. Lokhu ubuchwepheshe ikuvumela ukuba adale ezihlukahlukene imikhiqizo, elinesimo isikhathi eside zokusebenzela kanye ukumelana nokuhuzuka.
Iphepha aqukethe glue, engakutholanga iphele ukuphuma, eziyisisekelo ukuzivikela futhi ephepheni.
Polypropylene ukulondoloza izici yokuqala ngaphansi kwezimo ezihluke lokushisa.
Amalebula Self-ingcina ekhasini elingu-A4 amashidi - kuyindlela elula ukuklama umkhiqizo, okuyinto sinezici eziningi ezinhle, phakathi lapho kufanele kuqashelwe lokhu okulandelayo:
izindleko iphansana. Naphezu kweqiniso lokuthi amalebula abanjalo bangabaphostoli ejwayelekile ezibizayo, abazi ezidinga ukusetshenziswa anamathelayo kanye nezinye izakhi ezengeziwe. Yingakho kukhona i solution ukonga.
Ukubukeka yasekuqaleni. Ifomu ngokubulawa kukhawulwe kuphela umcabango we umklami. imibono abahlukahlukene ikuvumela ukusebenzisa ukunyatheliswa amalebula self-Yesigcilikisha nge ezihlukahlukene amasu kanye Ukukhetha enkulu materials. Ukuma eziyinkimbinkimbi kufezwa ngokusebenzisa ahlabayo.
isicelo Fast. Ukuze uxhume umkhiqizo kuya Akudingi izinyathelo extra, udinga nje unamathisele ohlangothini ingcina isembozo endaweni oyifunayo.
Amalebula Self-ingcina ingasetshenziswa likhethe umkhiqizo noma yiziphi izigaba, kuhlanganise zikagesi ezinkulu kanye nemikhiqizo. It got ukusakazeka kwalo ngenxa ukubukeka ekhangayo, engambi eqolo nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa.
Ukukhiqizwa libhekene malula ayimbijana isinyathelo enikeza emfushane ukulethwa isikhathi. Ngokuyinhloko ukuyiprinta ukusetshenziswa izikhala ekhethekile - iphepha substrate esikhiphekayo kakade camera ingcina. Kwaba phezu kwayo, zokunyathelisa. Ngo inqubo imikhiqizo yokukhiqiza ukuthola umumo kusengaphambili.
Ukuphrinta amalebula iphepha self-Yesigcilikisha has ukulandelana elandelayo yezenzo. Ngo esitolo ezikhethekile ingcina sisetshenziswa ungene substrate. Kamuva ibekwe okokusebenza kungenziwa ahlukaniswe kalula. In esigabeni lokugcina iphepha emithathu ungqimba is zahlanganiswa ngo imiqulu, asetshenziswa ekunyatheliseni womshini oqondile amalebula.
Esikhathini esizayo, wenza yokwehlisa kanye zokunyathelisa. Mhlawumbe ukusetshenziswa izakhi ezengeziwe isifiso ikhasimende. Ngokwesibonelo, ilebula self-Yesigcilikisha kungase kudingeke surface ngothayela noma ucwecwe izingxenye.
Naphezu inkimbinkimbi ubuchwepheshe, amalebula zingase zishintshe kakhulu. Izici Main zincike ezisetshenziswa futhi indlela yabo kwesicelo.
Izinto ezibaluleke ngokukhethekile, kufanele kukhethwe ngokuvumelana isembozo noma nezinye izakhiwo ebusweni, ezizosetshenziswa, izimo yokusebenza kanye nenqubo kophawu.
Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo ukukhethwa ingcina efanelekayo. Inketho engcono isakhiwo jikelele, kunikeza okunamathiselwe esiphephile evele kakhulu. Kubalulekile siphawule neminye anamathelayo ethandwa:
Kalula isakhiwo esikhiphekayo iyadingeka ukuze imikhiqizo umthengi ufuna ukususa kusukela umkhiqizo, isibonelo A4 amalebula self-Yesigcilikisha izincwadi.
samuntu Acrylic kufanelekile amalebuli, okuyinto bavezwa lokushisa eliphezulu amagugu.
Ukwakheka iraba liyadingeka amaphakheji okuyizinto ezindaweni nge umswakama high, izimpahla elondolozwe ku nokuqondisayo, kanye evele anolaka.
Ngaphezu kwalokho, kukhona anamathelayo ukuthi kunenjongo emincane. Ngokwesibonelo, it is a unesimo isakhiwo ephephile, bangakwazi ukunamathiselwa ku imikhiqizo ngokwabo. Ukusebenzisa izitikha ku izithelo kanye neminye imikhiqizo esetshenziswa evunyiwe ejenti ingcina egunyazelwe ukwenza lolu hlobo izimpahla. Ezimweni eziningi, ngesisekelo imikhiqizo enjalo ethengiswa ngokwehlukile futhi uphawu olukhombisa ukuthi kungenzeka ukusetshenziswa in the art.
Amalebula Self-ingcina zisongwe zingenziwa ngesisekelo yimiphi izinto kabanzi kunazo uthenge iphepha ezishisayo, polymer ifilimu, laminated nephepha plain.
Okuwukuphela kwento ethandwa kakhulu futhi angase abe kwabantu ezahlukene. Ingasetshenziselwa ngoba uhla lwezindawo izimpahla, kuhlanganise zokugqoka nokudla. Le mikhiqizo abe izindleko ephansi kuqhathaniswa nezinye izinhlobo, kodwa ngaso sonke isikhathi isikhathi eside futhi ukushintsha izici zabo kokuhlala isikhathi eside izimo okusezingeni eliphezulu nomswakama.
iphepha laminated has a eside service yokuphila ngokusebenzisa enamathela laminate. Kuyinto ukumelana imithelela mechanical, umswakama, futhi kungase kwenziwe embodiments ahlukahlukene. inhlanganiso appreciable wale mikhiqizo kuye kwaholela engekho kungenzeka ngokusebenzisa ezindaweni kakhulu lwalugobile futhi engalingani. anamathelayo okunokwethenjelwa banamathele nokusebenza okusezingeni eliphezulu esetshenziselwa kunenze nisondelane kangcono.
Esanele polymer amafilimu kugcwele umhlaba wonke. Self-ingcina ilebula nge nsuku iba amelana umswakama, okuhlala kanye ebusweni ezikhangayo. Lolu khetho okubiza kakhulu ezinye izinhlobo, kodwa amanani entengo aphezulu olungisiswayo ukusebenza ehlukile.
amalebula Yesigcilikisha iphepha ezishisayo imzuzele sasivumela kwandile, kulungile ngoba kophawu okusheshayo imikhiqizo Hypermarkets, amaketanga okudayisa nenani elikhulu lezimpahla kanye emafektri. Universal ingcina Ukwakheka isetshenziswa njengesisekelo. Izithombe kunyatheliswa thermally, isb ngokubeka amalahle izingxenye ekhethiwe kobuso stickers.
Izindlela zokusebenzisa izithombe
Ukuphrinta amalebula on iphepha self-Yesigcilikisha kungaba kwenziwe ngezindlela ezihlukahlukene. Zifakwe offset, ezobuchwepheshe kanye flexographic. Ukuphelelisa wenza foiling futhi ukusika ukuthola imikhiqizo ifomu angajwayelekile. Ubuchwepheshe kuyakhethwa ngokuhambisana ibhajethi ukubukeka ezidingekayo futhi umthamo ingqikithi.
I-Laptop Ikhibhodi ye-: indlela ukuhlanza?
Lasers "Bosch" (Bosch): Izibuyekezo
Gili Islands (Indonesia): incazelo, izithombe, izibuyekezo. Kanjani ukuze uthole Bali?